Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology (MOTAA): Lottery Winner's Chart (In Burmese)
အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၅-သန်းတန် ထီဆုရှင် အမျိုးသမီး တစ်ဦး၏ ဇာတာအား MOTAA နည်းစံနစ်ဖြင့် ဆန်းစစ် လေ့လာခြင်း။
ဤစာတမ်းသည် စာရေးသူ နျူမာန် (Numan) ရေးသားပြုစုထားသော “ကမ္ဘာကျော် ဘီလျံနာ သူဌေးကြီးများနှင့် ထီဆုကြီး ပေါက်သူများ၏ဘ၀ဖြစ်စဉ်နှင့် နက္ခတ္တအမြင်” စာအုပ်တွင် ပါဝင်သည့် အခန်း တစ်ခန်း ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံ တကာ မှ ဝေဒပပညာ ရှင်များ နှင့် ပညာရပ် ပိုင်းဆိုင်ရာ နှီးနှောပွဲ များတွင် သာမက၊ ဝေဒ ပညာ လေ့လာ နေသူများ အတွက် သင်ခန်းစာ အနေဖြင့် နိုင်ငံ တကာမှ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ. အစည်း အချို.တွင် စာရေးသူ အနေဖြင့် ဤဆောင်းပါးအား ၂၀၀၈ ခုနှစ် တွင် တင်ပြ ပို.ချ ပေးခဲ့ ဘူး သည်။ ထီပေါက်ခြင်း နှင့် ထီပေါက်သူများ အကြောင်း၊ အလွန်အမင်း ကြွယ်ဝ ချမ်းသာ သူများ၏ ဘ၀ဖြစ်စဉ် အထုပ္ပတ္တိ နှင့် ၄င်းတို.အား ကြယ်နက္ခတ် တာရာ၊ ဂြိုဟ်တို.က မည်သို. မည်ပုံ လွှမ်းမိုး ထားသည် ဆိုသည့် အကြောင်း များကို နက္ခတ္တ ဝေဒ ပညာကို လေ့လာနေသူများ၊ နက္ခတ္တ ပညာရှင်များ အနေဖြင့် အသေးစိတ် လေ့လာ လိုပါက မူရင်း စာအုပ်တွင် လေ့လာ နိုင်ပါသည်။ (စာရေးသူ။)
နိုင်ငံတကာ သင်တန်းသား များအတွက် - အင်္ဂလိပ် စာ ဆောင်းပါး ပို.ချ ချက်ကို အောက်ဖေါ်ပြ ပါ Web link မှ နေ၍ ရယူ နိုင်ပါသည်။
မြန်မာ တို.အသုံးပြုသော ဇာတာကွက် ပုံစံမှာ- အိန္ဒိယ အရှေ.ပိုင်း ပုံစံဖြစ်၍၊ ဤဆောင်းပါး တွင် မြန်မာသုံး ပုံစံဖြင့် ဖော်ပြထားပြီး၊ အိန္ဒိယ နှင့် နိုင်ငံတကာ မှ သင်တန်းသားများ၊ ၀ါသနာရှင်များ၊ လေ့လာသူများ အတွက် အိန္ဒိယတွင် အသုံးများသော တောင်ပိုင်း ပုံစံ ဇာတာကွက်၊ နှင့် မြောက်ပိုင်း ပုံစံ ဇာတာကွက် ပုံစံတို.ဖြင့် အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် ပို.ချချက် တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ထီပေါက်ခြင်းနှင့် ဝေဒ ပညာရပ်
အာကာသ ကောင်းကင်ပြင် တွင် တည်ရှိနေသော ဂြိုဟ်၊ နက္ခတ် တာရာ တို.သည် ကျွန်တော်တို. လူသား များ၏ ဘ၀ ကံကြမ္မာ အပေါ်တွင် မျိုးစုံသော ဆိုးကျိုး တို.ကို ဖြစ်စေခြင်း အားဖြင့် လည်း ကောင်း၊ ရုတ်တစ်ရက် မထင်မှတ်ပဲ ချမ်းသာ၊ အောင်မြင်စေခြင်း စသည့် ကောင်းကျိုး တို.ကို ဖြစ်စေ ခြင်း တို.ဖြင့် လည်းကောင်း လွှမ်းမိုး နေလျှက် ရှိနေပါသည်။ အောက်တွင် ဖေါ်ပြထားသော ဇာတာ သည် - ထိုဖြစ်ရပ် ကို ထင်ရှားစွာ သက်သေပြနေသော ဇာတာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
သို.သော်လည်း ဝေဒပညာ သည် လွန်စွာမှ နက်နဲသော ပညာရပ် ဖြစ်သည်။ Comprehensive Approach ခေါ် နက်နဲစွာ နားလည် နိုင်အောင် လေ့လာမှုနှင့် Integrated Study ခေါ် အချက်အလက် အားလုံးကို တစ်ခုတည်း အနေဖြင့် ပေါင်းစည်း လေ့လာမှသာလျှင် အဖြေမှန်သည် မည်သို. ဖြစ်မည် ဆိုသည်ကို မှန်ကန်စွာ ကောက်ချက် ဆွဲထုတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
သို.မဟုတ်ပဲ- မိမိတွေ.သည့် အချက် တစ်ခုကောင်း၊ ၂-ခုကောင်း ဆွဲထုတ် ကောက်ချက် ဆွဲပါက- မျက်မမြင် ပုဏ္ဏား ၆-ယောက် ကဲ့သို. မိမိ တွေ.ရှိချက် အပေါ်မှ ထင်ရာ ပြောနေမိသလို ဖြစ်သွား ပါလိမ့်မည်။
ဖေါ်ပြပါ ဇာတာသည် သားသမီး တို.၏ ပညာရေး အတွက် နေ.ဘက်တွင် ဆေးခန်းတစ်ခု တွင် အတွင်း ရေးမှုး တစ်ဦး အဖြစ် လုပ်ကိုင်ယင်း တစ်ဘက်မှ လည်း ညဘက်တွင် အချိန်ပိုင်း အလုပ်များကို ကြုံသလို လုပ်ကိုင် ပြီး ရုန်းကန် နေခဲ့ရသော အမေရိကန် အိမ်ထောင် ရှင် အမျိုးသမီး တစ်ဦး ဖြစ်သူ ရှယ်ရွန် ၏ ဇာတာ ဖြစ်ပါသည်။ (မှတ်ချက်- ဇာတာ ပိုင်ရှင် ၏ ကိုယ်ပိုင် ခွင့်ပြုချက် ဖြင့် Astrobank Research Database မှ နေ၍ စာရေးသူ ကိုယ်တိုင် စစ်ဆေး ထားသော ဇာတာ ဖြစ်ပါ၏။)
ဤဆောင်းပါးတွင် ဘာဝ တို.အား ဂြိုဟ်တို.က လွှမ်းမိုး မှုကို ဖော်ပြရာတွင် မကြာခဏ ဆိုသလို- အလယ်ဗဟို အချက်အချာ အမှတ် ဆိုသော ဝေါဟာရ ကို သုံးနှုန်း ထား၏။ ဘာဝ တို.၏ အလယ် မှတ် ဆိုသည် မှာ- လဂ်နှင့် အံသာခြင်း တူညီ သည့် အမှတ်နေရာကို ဆိုလို ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဥပမာ- ဤဇာတာတွင် လဂ်သည် ၆ အံသာ၊ ၂၀ လိတ္တာ ရှိနေသဖြင့် ဘာဝ တို.၏ အလယ်မှတ် မှာလည်း ၆ အံသာ၊ ၂၀ လိတ္တာ စီတွင် အသီးသီး ရှိနေကြပါသည်။
မူလတြိဂေါဏအိမ်ရှင် တို.အကြောင်း၊ ဂြိုဟ်တို.၏ အင်အားကို ဆန်းစစ် လေ့လာပုံ အကြောင်း၊ ဘာဝ တို.အပေါ် အခြား ဂြိုဟ်တို.ပေါ် အင်အား သက်ရောက် ပုံ အကြောင်းတို.ကို အပြည့်အစုံ သိလိုပါက မူလ စာအုပ်တွင် ဖတ်ရှုရန် အကြံပြုပါသည်။ မူလ တြိဂေါဏ အိမ်ရှင်ကို အသုံးမပြုပဲ- သာမာန် အများ သိထားသော အိမ်ရှင်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် ဇာတာများကို လေ့လာရာ၍ ရှုပ်ထွေး စေပြီး၊ အဖြေမှန် နှင့် ဝေးကွာစေပါသည်။
စာရေးသူ ကိုယ်တိုင် သုတေသန ပြု၍၊ ဖော်ထုတ် အသုံးပြုနေသော MOTAA (Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology) နည်းစနစ် တွင် အလွန် ရှင်းလင်း လှသော အောက်ပါ နည်းလမ်း တို.ကို သာ အသုံးပြုထားပါသည်။
- အချို.သော မြန်မာ ပညာရှင်များ ကိုးကားသည့် ကြာသပတေးဂြိုဟ်၊ နှင့် ၂-တန်.ဘာဝ တို.ကို စစ်ဆေး ခြင်းသည် လွန်စွာမှ ယေဘူယျ ကျပြီး၊ ထီပေါက်ခြင်း နှင့် ၀င်ငွေ ကြွယ်ဝ ချမ်းသာ ခြင်း တို.ကို ရောပြွမ်း နေ၍ မရေရာ သော နည်း စနစ် ဖြစ်သည်။
- ထီပေါက် ခြင်း နှင့် ချမ်းသာခြင်း သည် လုံးဝ ကွာခြားသည်။ ချမ်းသာ ခြင်း ဆိုရာ တွင်ပင် မိမိ ကိုယ်တိုင် ကြိုးစား ၍ အောင်မြင် ချမ်းသာ ခြင်းမျိုး ရှိသလို- ကံကောင်း စွာဖြင့် ချမ်းသာ သော မျိုးရိုး၊ မြင့်မြတ်သော အသိုင်းအ၀ိုင်း တို. တွင် သက်တောင့် သက်သာ ဖြင့် ကျင်လည် ကြီးပြင်း ချမ်းသာ ရခြင်း မျိုးလည်း ရှိသည်။
- ထီပေါက်ခြင်း သည် ကြိုးစား အားထုတ် ၍ ရသော ၀င်ငွေမဟုတ်။ လောင်းကစား ဆန်ဆန်၊ မထင်မှတ်ပဲ၊ အားမထုတ်ရပါပဲ ရုတ်တစ်ရက် ၀င်ငွေ ဖြစ်သော ကြောင့် ဇာတာ တွင် တည်ရှိသော ဂြိုဟ်၊ တို.၏ အနေအထား သည် မိမိကိုယ်တိုင် ၀င်ငွေရှာ၍ ချမ်းသာ သောသူ၊ မိဘ မျိုးရိုး၊ ပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းမှုကြောင့် ချမ်းသာ သောသူ တို.နှင့် လွန်စွာ ကွာခြားသည်။
(အသေးစိတ်ကို “ကမ္ဘာကျော် ဘီလျံနာ သူဌေးကြီးများနှင့် ထီဆုကြီး ပေါက်သူများ၏ ဘ၀ ဖြစ်စဉ်နှင့် နက္ခတ္တအမြင်” စာအုပ်တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။)
- ထို.ကြောင့် အင်အား မထုတ်ရပဲ အချောင် ရခြင်းမျိုးကို ဖြစ်စေသည့် ၈-တန်.ဘာဝ၊ ၈-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင်၊ ၈-တန်.ဘာဝ တွင် ရပ်တည် နေသည့် ဂြိုဟ်တို.ကို ပထမဦးစွာ လေ့လာ ရပါသည်။ (မှတ်ချက်- မြန်မာ တို.အနေဖြင့် မရဏ ဘာဝ ဟု အသိများသော ဒုဌာန ဘာဝ ဖြစ်သည့် ၈-တန်.သည် ထီပေါက်ခြင်း၊ သံသရာ မှ လွတ်မြောက်ကြောင်း နှင့် ဂမ္ဘီရ ပညာများ အတွက် အရေး အကြီးဆုံး ဘာဝ ဖြစ်သည်။)
- ကံကောင်းခြင်း၊ သက်တောင့် သက်သာ ရရှိခြင်း ကို ဖြစ်စေသည့် ဖြစ်စေသည့် ၉-တန်.ဘာဝ၊ ၉-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင်၊ ၉-တန်.ဘာဝ တွင် ရပ်တည် နေသည့် ဂြိုဟ်တို.ကို ထပ်မံ လေ့လာ ရပြန် ပါသည်။
- ပုတ္တရဘာဝ ဟု မြန်မာ ပညာရှင် များ သိထားကြသော ၅-တန်.ဘာဝသည် ဇာတာရှင်၏ ပညာရေး၊ သားသမီးရေးတို.ကိုသာ ဖော်ဆောင် နေသည်မျှ မက- လောင်းကစား တွင် အနိုင်ရရှိခြင်း၊ စတော့ခ် ရှယ်ယာ အရောင်းအ၀ယ်မှ အမြတ်အစွန်း ရရှိခြင်း၊ ထီပေါက် ခြင်း တို.ကိုပါ ထောက်ပံ့ ပေးထား သဖြင့် ၅-တန်.ဘာဝ၊ ၅-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင်၊ ၅-တန်.ဘာဝ တွင် ရပ်တည် နေသည့် ဂြိုဟ်တို.ကို လေ့လာ ရန် လိုအပ်ပါသည်။
- ထို.နောက်တွင် တော့ မထင်မှတ်သော ဖြစ်ရပ်တို.ကို ဖြစ်စေသည့် ရာဟု အား လေ့လာရပါသည်။ အဆိုး များ၊ အနှောက်အယှက် များကို ဖြစ်စေတတ်သည့် ရာဟုသည် မူလဇာတာ တွင် တည်နေသော ရာသီ၊ ဘာဝ အိမ်၊ ယှဉ်နေ သော နက္ခတ်၊ စီးထားသော န၀င်း တို.ကို မူတည်၍ ဆိုးကျိုးများ ပေးနိုင် သကဲ့သို.၊ အချို.သူများ အတွက် ရုပ်ဝတ္တု ပိုင်းဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုတို.ကို လည်း ဖြစ်ပေါ် စေ တတ်သည်။
ဇာတာရှင်အား ဧပြီလ ၂၄၊ ၁၉၅၀ ခုနှစ် နံနက် ၄ နာရီ ၄၅ တွင် အမေရိကန် နိုင်ငံ တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။
၁၉၉၆-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၆-ရက်တွင် ဒေါ်လာ သုံးဆယ့် ငါးသန်း တန် ထီဆုကြီးကို ဆွတ်ခူးခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
အောက်တိုဘာလ ၁၉-ရက်တွင် ကွန်ပျူတာမှ အလိုအလျောက် ထီနံပါတ် ထုတ်ပေးသော Quick Pick ထီလက် မှတ်ကို ၀ယ်ယူခဲ့သည်။ မွေးဖွားချိန် တိကျမှုမှာ- AA အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။
ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှာ ဂျက်အင်ဂျင် များ တပ်ဆင်သော စက်ရုံတွင် အလုပ်လုပ် ရသူဖြစ်ပြီး၊ ဇာတာရှင်တွင် ၁၈-နှစ်နှင့် ၂၁-နှစ် အရွယ် ရှိသား နှင့် သမီး ဖြစ်သူ တို.ကို ကောလိပ် တက်နိုင်ရေး အတွက် နေ.ဘက် တွင် အချိန်ပြည့် ဆေးခန်း အလုပ် နှင့် ညဘက် တွင် အခြား အလုပ်တို.ကို အချိန်ပိုင်း လုပ်ကိုင်ကာ ကြိုးစား ရုန်းကန် နေခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။
(၁) ဤဇာတာတွင် ၈-တန်တွင် ရပ်တည်သော ဂြိုဟ်၊ ၈-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် တို.မရှိပါ။
(၂) ရုတ်တစ်ရက် အလွယ်တကူ ရသော ငွေကြေးကို ကိုယ်စားပြုသည့် ၉-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင်မှာ ကြာသပတေး ဖြစ်ပြီး၊ ၄င်းသည် လာဘ် နှင့် သက်ဆိုင်သော ၁၁-တန်.ဘာဝတွင် ရပ်တည် နေသည်။ ကံကောင်းခြင်း ကိုဖြစ်စေသော သဘာဝ သောမဂြိုဟ် ကြာသပတေးသည် အလွယ်တကူ ကံကောင်းခြင်း ကို ဖြစ်စေသည့် ၉-တန်.ဘာဝ အိမ်ရှင် ဖြစ်နေသည် သာ မက- အင်အား ကောင်း လည်း ရှိနေခြင်း သည် ဇာတာရှင် အား ကံကောင်း ရခြင်း၏ အကြောင်း တရား တစ်ခု ဖြစ်နေသည်။
(၃) နောက်ထပ် တစ်ခု- အနေဖြင့် မှာ ကြာသပတေး ပိုင် သော ၉-တန်.ဘာဝ၏ အလယ်ဗဟိုချက်မှတ် အား လဂ်သခင် ဖြစ်သော အင်္ဂါ မှ ၇၇% သော အင်အား ဖြင့် ၄-တန်. အမြင် ပြုထားသည်။ ဤနေရာတွင် ထပ်မံကြည့်လိုက်ပါက- ဘာဝစက် တွင် - အင်္ဂါသည် လဂ်မှ ရေတွက်လျှင် ၆-တန်.တွင် ရပ်တည် ထားသည်။ အင်္ဂါသည် လည်းကောင်း၊ ၆-တန်.သည် လည်းကောင်း သွေးသံ နှင့် မတော်တစ်ဆ မှုတို.ကို ဖေါ်ညွှန်းနေလေရာ-
ဗေဒင် ပညာရှင်များ တစ်ပြောတည်း ပြောနေကြသည့် ကြောက်စရာ ကောင်း သော အင်္ဂါ (တနည်းအားဖြင့် လည်း ဒုဌာန ဘာဝတွင် ရပ်တည် ထားသော ပါပ ဂြိုဟ်အင်္ဂါသည် ဇာတာရှင် ကို ဒုက္ခပေးလေမည်လား၊၊
(၄) ဟုတ်ပါပြီ၊ ဒါဆိုယင်- အင်္ဂါ နှင့် ပါတ်သက်၍ အသေးစိတ် ဆန်းစစ်ဘို. လိုလာပါပြီ။
အမှန်အားဖြင့်- ၆-တန်.ဘာဝတွင် ရပ်တည်နေသော်လည်း အင်္ဂါသည် ဇာတာရှင်၏ လဂ်သခင် စစ်စစ် ဖြစ် နေ၏။ ဆိုလိုသည် မှာ သာမာန် လဂ်အိမ်ရှင်ကို ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပဲ၊ လဂ်၏ မူလ တြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်နေခြင်း ကို ဆိုခြင်း ဖြစ်၏။ ဒါတင်ပဲလား ဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါ။ သူသွားရောက် ရပ်တည်နေသည့် ရာသီ အိမ်ရှင်က တနင်္ဂနွေ ဖြစ်နေ၏။ ဤဇာတာတွင် တနင်္ဂနွေသည် မြန်မာ ပညာရှင်များ သိထားသည့် ပုတ္တရဘာဝ ခေါ် ၅-တန်.ဘာဝ ၏ မူလ တြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်နေသည်။ ၅-တန်.ဘာဝ သည် ပညာရေး၊ သားသမီး ကိစ္စတို.ကို သာ တာဝန် ထမ်းဆောင်သည်မက လောင်းကစား၊ ထီ တို.ကိုလည်း ဖေါ်ဆောင် နေသည်။ ထိုမျှ မကသေး- အဆိုပါ အင်္ဂါသည် န၀င်း စက်တွင် ရုတ်တစ်ရက် ကံကောင်းခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် ကြာသပတေး ပိုင် ရာသီတွင် ရပ်တည် ထား၏။ နောက်တစ်ဆင့် ထပ်စစ် လိုက်ပြန်တော့ အင်္ဂါသည် ဥတ္တရ ဖလဂုဏီ နက္ခတ် တွင် တည်ကာ- ၄င်း နက္ခတ်သည် လောင်းကစားကို ကိုယ်စားပြုနေသည့် ၅-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိ ဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်သော တနင်္ဂနွေအပိုင် နက္ခတ် ဖြစ်နေ၏။
ထိုသို.-ထိုသို. ဖြင့် လောင်းကစားတွင် အောင်မြင်ခြင်း၊ ထီပေါက်ခြင်း တို.ကို ဖြစ်စေသေည့် တနင်္ဂနွေနှင့် ထဲထဲ ၀င်ဝင် ပါတ်သက် နေသည့် အင်္ဂါသည် ရုတ်ချည်း ဆိုသလို ကံကောင်းခြင်း ကို ဖြစ်စေသည့် ၉-တန်.ဘာဝကို အမြင် ပြုထားခြင်း ဖြင့် မည်သည့် ဖြစ်ရပ်ကို ဖြစ်စေ သနည်း ဆိုသည်ကို ပညာရှင် တို. အလွယ် နားလည် နိုင် ပါပြီ။
(၅) နောက် တစ်ဆင့် အနေဖြင့်- ရုတ်တစ်ရက် အချောင် ရခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် ၈-တန်.ဘာဝ၏ အဓိက ဗဟို ချက်မှတ် အား မထင်မှတ် သော ဖြစ်ရပ်များကို ဖြစ်စေသည့် ရာဟုမှ ၉-တန်.အမြင် ၇၆% ဖြင့် အမြင် ပြုထား၏။ လာပြန်ပြီ နောက်တစ်ခါ- ၈-တန်.ဆိုသည် က သေဆုံးခြင်းကို ဖေါ်ဆောင်သည် မရဏ ဘာဝ၊ ရာဟု ဂြိုဟ်က - မထင်မှတ်သော ဖြစ်ရပ် များကို ဖြစ်စေသည့် ဂြိုဟ်ဆိုး- ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်ကြမည်နည်း။
ဒီတစ်ခါက ရာဟု- ဂြိုဟ် မွှေတတ်သည့် ရာဟု- ဗေဒင်ဆရာများ စိုးရိမ်ရသည့် ရာဟု-
ဒီရာဟုက- ဇာတာရှင်ကို အကောင်းပေးမည်လား၊ အဆိုးပေးမည်လား၊
စောစောက အင်္ဂါကို လေ့လာခဲ့ သလိုပင် ရာဟုကို လေ့လာကြပါစို.။
ရာဟုသည် ဇာတာရှင်၏ ဗျာယ ဘာဝ ဟု ခေါ်သော ၁၂-တန်.ဘာဝ တွင် တည်ထား၏၊ သို.သော်လည်း ၄င်း၏ ဗဟိုချက်မှတ် နှင့်မူ ကွာလှမ်း၏။ ရာဟု သွားနေသည့် အိမ်ရှင်က ကြာသပတေး၊ အထက်တွင် ဖော်ပြ ခဲ့သည့် အတိုင်း ကြာသပတေး အနေဖြင့် ရုတ်ချင်း ကံကောင်းခြင်း ကို ဖြစ်စေသည့် ၉-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်နေ၏။ နောက်ထပ်ကြည့် လိုက်ပြန်တော့- ၄င်း၏ နက္ခတ်သခင်က စနေ ဖြစ် နေ၏။ စနေက- ထီ၊ လောင်းကစားတို. နှင့် သက်ဆိုင်သော ၅-တန်.တွင် တည်နေသော ဂြိုဟ် ဖြစ်၏။ ထိုမျှ မက စနေက- လာဘ် လာဘ ၀င်ငွေနှင့် ဆိုင်သော ၁၁-တန်.ဘာဝ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်နေ၏။ အဖြေက ရှင်း လာပါပြီ။ ဒီရာဟုက- ဇာတာရှင်အား ထီပေါက်စေရန် အကြောင်းပြုမည့် ရာဟု ဖြစ်နေ၏။
တကယ်တော့ ဒီဇာတာက ထူးဆန်း၏၊ ကြောက်စရာ ကောင်းသော အင်္ဂါ၊ လန်.စရာ ကောင်းသော ရာဟု တို.နှင့် အံသာ အားဖြင့် နီးနီးစပ်စပ် ပါတ်သက်နေ၏။ သို.သော် ဇာတာရှင်အား ကောင်းကျိုး ဖြစ်နေ စေ၏။
ဥပမာ အားဖြင့် လူတစ်ယောက် တွင် - လူမိုက် မိတ်ဆွေ တို.နှင့် လူရိုးလူကောင်း အပေါင်း အသင်း တို. ရှိသည် ဆိုပါစို.။ ပင်ကိုယ် သဘာဝ အားဖြင့် လူမိုက် သည် လူအများအား ဒုက္ခ ပေးတတ်၏။ သို.သော် သူအနေ ဖြင့် ချစ်ခင် သောသူ၊ လေးစား သော သူတို.အတွက်မူ- ရုတ်တစ်ရက် ထင်မထားပဲ၊ ၀ုန်းဝုန်း ဒိုင်းဒိုင်း ကောင်းကျိုး ထ ပြုတတ်၏။ ထိုသူတို.ကို လုံးဝ ဒုက္ခမပေးဟု မဆိုသည်ကို သတိပြုပါ။ လူရိုးလူကောင်း မိတ်ဆွေ တို.မှာ မူ ယေဘူယျ အားဖြင့် မည်သူ.ကိုမျှ ဒုက္ခ မပေး တတ်။ သို.သော်လည်း ကောင်းကျိုး ပြုရာ တွင်လည်း တစ်ဆင့်ခြင်း၊ တစ်ရစ်ချင်း၊ ဖြေးဖြေး ချင်းသာ ကောင်းကျိုး ပြုတတ်သည်။ ကောင်းကျိုး ပမာဏ အနည်း အများသည် ထိုမိတ်ဆွေ၏ သြဇာ၊ အရှိန်အ၀ါ၊ တန်ခိုး အင်အား၊ မိမိနှင့် ရင်းနှီးမှူ၊ အချိန် အခါ သင့်မှု တို. အပေါ်တွင် မူတည်၏။ ဤဇာတာရှင် အနေဖြင့် မူ- လူတိုင်း ကြောက်ကြရသည့် အင်္ဂါနှင့် ရာဟုတို.၏ ချစ်ခင် မှုကို ရလိုက်ခြင်း သည် ရုတ်တစ်ရက် ချမ်းသာသွား ရန် အရေးပါသည့် အကြောင်း တစ်ခုပင် ဖြစ်၏။
(၆) ဤနောက်ဆုံး အချက်က တော့ အရေးအကြီး ဆုံး အချက် ဖြစ်ပါ၏။ ရုတ်တစ်ရက် ကံ ကောင်းခြင်းကို ဖြစ်စေ သည့် ၉-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင်လည်း ဖြစ်၊ သဘာဝ သောမ ဂြိုဟ်လည်း ဖြစ်၊ အင်အား ကြီးမားသော ဂြိုဟ် ဖြစ်သည့် ကြာသပတေး ဂြိုဟ်သည် ၃-တန်.၊ ၅-တန်.၊ ၇-တန်. နှင့် ၁၁-တန်. တို.၏ အလယ်မှတ်ကို ၉၈% အားဖြင့် အတိအကျ နီးပါး လွှမ်းမိုး ထား၏။ (သတိပြုရမည့် အချက်မှာ- အများ ယူဆ ထားကြသလို- ကြာသပတေးသည် လူတိုင်း အတွက် ကောင်းကျိုးပေးနေသော ဂြိုဟ်မဟုတ်၊ ပင်ကိုယ် သဘာဝ ကောင်း၍ သဘာဝ သောမဂြိုဟ်ပင် ဖြစ်သော်လည်း၊ ဒုဌာန ဘာဝ တို.၏ မူလတြဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်နေပါက- ပြင်းထန် သော ဆိုးကျိုးတို.ကို ပေးတတ်သည်။)
ထီပေါက်ချိန် တွင် တွေ.ရသော အနေအထား။
ကံအနိမ့်အမြင် ဒဿာကို စစ်ဆေးခြင်း။
(၁) ထီပေါက် သော ကာလတွင် ဇာတာ ရှင် အနေဖြင့် ကိတ်-ကြာသပတေး- သောကြာ ဒဿာ တွင် ရောက်ရှိ နေသည်။ မူလ ဇာတာ တွင် ဖေါ်ပြခဲ့ သည့် အတိုင်း ရုတ်တစ်ရက် အလွယ်တကူ ရရှိ ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော၊ ကံကောင်း ခြင်းကို ဖြစ်စေ သော ၉-တန်.၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ကြာသပတေး သည် အထင်ရှားဆုံးသော အကျိုးပေး ခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် အန္တရ ဒဿာ တွင် တည်နေခြင်းသည် ဤကာလတွင် ရုတ်တစ်ရက် ကောင်းကျိုးဖြစ်မည့် ကာလ ဖြစ်သည် ကို ဖေါ်ပြ နေသည်။
(၂) ၉-တန်. အိမ်ရှင် ဒဿာ စားသော ကာလသည် ဇာတာရှင်၏ အတိတ်ဘ၀မှ ကုသိုလ်ကံ ကောင်းကျိုးကို ခံစား ရရှိတတ်သော ကာလပင် ဖြစ်ပါ၏။
ရုတ်တစ်ရက် ကြည့်လိုက်ပါက- ကိတ် ထူလ ဒဿာ လည်းဖြစ်၊ ပြတန္တရ ဒဿာ မှာ ၇-တန်. သခင် မာရက ကာရက ဂြိုဟ် သောကြာ- ပိုင် ဒဿာ ပိုင်း တွင် ဖြစ်နေသဖြင့် အသေးစိတ် မကြည့်မိပါက ဇာတာရှင် တွင် အသက်အန္တရာယ် ရှိနိုင်သည် ဟု ယူဆ စရာ ဖြစ်နေသည် ကို သတိပြုပါ။ MOTAA နည်းစံနစ် အရ သိပ္ပံနည်း ကျစွာဖြင့် ဂြိုဟ်တို.၏ အင်အား အရ- ကံကြမ္မာကို ဂရပ် ဆွဲဖေါ်ပြလိုက် သော အခါ အောက် တွင် မြင်ရသည့် အတိုင်း ကံကြမ္မာ အနိမ့်အမြင်ကို တိကျစွာ မြင်နေရပါသည်။
အထက်ပါ ဂရပ်ဖ် သည် မူလဇာတာတွင် ပါရှိသော ဂြိုဟ်များ၏ အင်အား အလိုက် ဇာတာရှင်၏ ကံကြမ္မာ အနိမ့်အမြင့် အနေအထားကို ဖော်ပြထားသော ဂရပ်ဖ် ဖြစ်သည်။ ဇာတာရှင် အနေဖြင့် ကံကြမ္မာ အပြောင်း အလဲကို ၁၄-ရက်၊ ၅-လ၊ ၁၉၉၆-ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် ကြုံတွေ.ရမည်ကို ဖော်ပြနေ သော်လည်း ထိုကာလ သည် ဇာတာရှင်အနေဖြင့် ကိုယ်စိတ် ချမ်းသာ မှု နှင့် မပြည့်စုံနိုင်သေးပဲ၊ ပို၍ တည်ငြိမ် အေးချမ်းသော ဘ၀ကို ၁၉၉၉-ခုနှစ် နောက်ပိုင်း၊ ထီပေါက်ပြီး ၃-နှစ် ခန်. အကြာမှ ရရှိလိမ့်မည် ကို ဖော်ပြနေသည်။ ဤဂရပ်သည် ငွေကြေး ပမာဏ အနည်းအများကို ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပဲ၊ ကံကြမ္မာ အနေအထား ကို ဖေါ်ပြခြင်း ဖြစ်သည် ကို သတိပြုပါ။
ကောဇာ ဂြိုဟ်နှင့် ပါတ်သက် ၍ လေ့လာရာတွင်
- ကောဇာ ဂြိုဟ် အချင်းချင်း လွှမ်းမိုး ဆက်စပ်မှုကို လေ့လာခြင်း၊ (Transit to Transit)
- ကောဇာ ဂြိုဟ် တို.မှ မူလဇာတာ၏ ဂြိုဟ်တို. အပေါ်တွင် လွှမ်းမိုး သက်ရောက် မှုကို လေ့လာခြင်း၊ (Transit to Natal)
- ကောဇာ ဂြိုဟ် တို.မှ မူလဇာတာ၏ ဘာဝ တို. အပေါ်တွင် လွှမ်းမိုး သက်ရောက် မှုကို လေ့လာခြင်း၊ (Transit to Natal)
- မူလ ဂြိုဟ် တို.မှ ကောဇာ ဂြိုဟ် တို. အပေါ်တွင် ပြန်လည် လွှမ်းမိုး သက်ရောက် မှုကို လေ့လာခြင်း၊ (Natal to Transit)
ကောဇာဂြိုဟ် အချင်းချင်း ဆက်စပ်နေမှုများ။
(၁) ပုံမှန်အားဖြင့် ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားမှု၊ မတော်တစ်ဆ ဖြစ်ရပ်များကို ဖြစ်ပွားစေရန် တာဝန် ယူလေ့ ရှိသည့် ၆-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်သော ဗုဒ္ဓဟူးသည် ကောဇာ တနင်္ဂနွေနှင့် ကောဇာ တနင်္လာ (စန်း) တို.အား လွှမ်းမိုး ထားသည်။ (တနင်္ဂနွေအား ၄-အံသာမျှ နီးပါး နီးကပ်စွာ ပူးထား၍၊ စန်းအား အမြင်ပြု ထားသည်။ စန်းအား လွှမ်းမိုးမှုမှာ မပြောပလောက်ပါ။)
(၂) ဤအခြေအနေသည် မည်သည့် အဓိပ္ပါယ် ဆောင်နေပါသနည်း။ သူမ၏ သားသမီး တစ်ဦးဦး အနေဖြင့် မတော် တစ်ဆ ထိခိုက် ဒဏ်ရာ (သို.မဟုတ်) ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားမှု ဖြစ်လေမလား။ (သားသမီး - ၅-တန်.ဘာဝ အိမ်ရှင် တနင်္ဂနွေ၊ ၆-တန်.အိမ်ရှင်၏ အမြင်- မတော်တစ်ဆမှု၊ ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားမှု)
(၃) စာရေးသူ အနေဖြင့် ထီပေါက်သူ အများအပြား၏ ဇာတာများ၊ မတော်တစ်ဆ ဖြစ်သူ များ၏ ဇာတာများကို အသေးစိတ် လေ့လာ သုတေသန ပြုခဲ့ရာတွင် ထူးဆန်းသော တွေ.ရှိချက်မှာ- ၄င်းတို.အား အမှတ်တမဲ့ လေ့လာမည် ဆိုလျှင် ဆင်တူ ရိုးမှား ဖြစ်နေတတ် သော အခြေအနေ တို.ကို တွေ.ရပါသည်။ မှန်ကန် သော နည်းစနစ် ကို အသုံးပြု ၍ အသေးစိတ် ဆန်းစစ်ကြည့်မှ သာလျှင်- မည်သို. ဖြစ်မည်ကို ပြောနိုင် မည် ဖြစ်ပါ၏။
(၄) အမှန် အားဖြင့်လည်း ထီပေါက်ခြင်း သည် မတော်တစ်ဆ မှု တစ်ခု ဖြစ်၏။ သို.သော် အကောင်းဘက် တွင် လာ၍ ဖြစ်သော မတော်တစ်ဆမှု ဖြစ်ပါ၏။ ၅-တန်.ဘာဝ (သားသမီး ဘာဝ) ၏ အလယ်ဗဟိုချက်မှတ် အားလည်း ကောင်း ဒုဌာန ဘာဝ အိမ်ရှင်များ၏ အပူး အမြင်မှ ကင်းလွတ်နေ၏။ ယခု ဇာတာရှင်၏ လဂ်အား ကောဇာ တနင်္ဂနွေနှင့် ကောဇာ တနင်္လာ (စန်း) တို. မှ ကောင်းစွာ ထောက်ပံ့ထားခြင်း၊ မူလ ဇာတာတွင်လည်း သူမ ၏ လဂ်အား ထိခိုက် ဖျက်ဆီး ထားခြင်း တို.မှ ကင်းလွတ်နေခြင်း တို.ကြောင့် ဇာတာရှင် ကိုယ်တိုင် မတော်တစ်ဆမှုကြောင့် အသက်အန္တရာယ်၊ ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရခြင်း တို.ဖြစ်နိုင်ချေကို လည်းကောင်း၊ မူလဇာတာတွင် ၅-တန်.ဘာဝနှင့် ၄င်း၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် တို.အား ဂြိုဟ်ဆိုးတို.၏ နှောက်ယှက် လွှမ်းမိုး ထားခြင်း တို.ကို မတွေ.ရပြန်၍ လည်းကောင်း၊ ဇာတာရှင် ၏ သားသမီး တို.တွင် မတော် တစ်ဆ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိသည် ဆိုသော အချက်ကို ပယ်ထုတ် ပစ်ရပါလိမ့်မည်။
(၅) ယင်းသို ပယ်ထုတ်လိုက်သော အခါ- အချက် (၁) တွင် တွေ.ခဲ့ရသော ၆-တန်.ဘာဝ ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်သော ကောဇာ ဗုဒ္ဓဟူး နှင့် ၅-တန်.ဘာဝ ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်သော ကောဇာ တနင်္ဂနွေ တို. ၉၂% ဖြင့် ပူးနေမှုသည် ၅-တန်.ဘာဝ ၏ ပရိယာယ် တစ်ခု ဖြစ်သော သားသမီး တို.တွင် အန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်သည် ဆိုသည့် အဖြေထက်- ထီပေါက်၊ လောင်းကစား အနိုင်ရမှု ရမှု ဆိုသော အဖြေ က ပို၍ သက်ဆိုင်လာသည် ကို တွေ.ရတော့၏။ ထိုမျှ မကသေး- စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင် ခြင်းကို ကိုယ်စား ပြုသည့် ၄-တန်.သခင် ဖြစ်သော ကောဇာ တနင်္လာ ၏ ထောက်ပံ့မှုကို ၉၉% ရထား၏။ ထို.ကြောင့် မတော်တစ်ဆ အန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်ချေကို လုံးလုံးလျားလျား ပယ်ထုတ်ပစ်လိုက် နိုင်ပြီး၊ ထီပေါက်ခြင်း ဖြစ်နိုင် ချေက ရုပ်လုံးပေါ်လာပါပြီ။
(၆) နောက်ထပ် တစ်ဖန် ကြည့်လိုက်ပါကလည်း- လာဘ် လာဘကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ၁၁-တန်.ဘာဝ၏ မူလ တြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ကောဇာ စနေအား လဂ်သခင် ဖြစ်သော ကောဇာ အင်္ဂါမှ (ဤဇာတာ အတွက် အင်္ဂါသည် ဂြိုဟ်ဆိုး မဟုတ်ကြောင်း အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့ပါပြီ။) ၉၃% ဖြင့် သော်လည်း ကောင်း၊ ၇-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ သခင် ကောဇာ သောကြာမှ ၈၆% ဖြင့် လည်းကောင်း၊ မထင်မှတ် သော ဖြစ်ရပ် တို.ကို အငိုက်ဖမ်း ဖြစ်ပေါ် စေတတ်သည့် ကောဇာ ရာဟုမှ ၈၃% ဖြင့် လည်းကောင်း တပြိုင်နက် လွှမ်းမိုးထား ကြောင်း ကို တွေ.နေရပါ၏။
(၇) ကောဇာ ဂြိုဟ်အချင်း ချင်း လွှမ်းမိုး ဆက်စပ် နေချက်မှာကို စုပေါင်း သုံးသပ်လိုက်ပါက ရလာမည့် ၀င်ငွေ လာဘ်လာဘ တို.သည် ဤကာလ အတွင်း မတော်တစ်ဆ ၀င်လာရမည်ကို ဖော်ပြနေပါသည်။ ထို.ကြောင့် ဇာတာ ရှင်အနေဖြင့် မတော်တစ်ဆမှု accident ဖြစ်သွားပါ၏။ သို.သော် အများသိထားကျသော အန္တရာယ် ဖြစ်စေသည့် မတော်တစ်ဆ accident မျိုးမဟုတ်ပဲ၊ မတော်တစ်ဆ ရရှိသွားသော ဒေါ်လာ ၃၅-သန်းပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။
ကောဇာဂြိုဟ်များမှ မူလဘွားဂြိုဟ်များသို. လွှမ်းမိုးမှု။
(၁) ထီပေါက် သော နေရက် ပိုင်းတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် မတော်တစ်ဆမှု တို.ကို ဖြစ်စေသည့် ၆-တန်.ဘာဝ၏ မူလ တြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်သော ကောဇာ ဗုဒ္ဓဟူးသည် မူလ ဇာတာ ၏ တနင်္ဂနွေ (ထီပေါက်ခြင်း၊ လောင်းကစား အနိုင်ရခြင်း ကို ဖြစ်စေသည့် ၅-တန်.ဘာဝ၏ မူလ တြိဂေါဏ အိမ်ရှင်) အား၊ သမတ်အမြင် အား ၈၇% ဖြင့် လွှမ်းမိုး ထားသည်။ အခြား တစ်ဘက်မှ- ကြည့်ပါက လည်း မူလ တနင်္ဂနွေသည် ကောဇာ တနင်္ဂနွေ၏ အင်အား ၉၉%၊ ကောဇာ တနင်္လာ၏ အင်အား ၉၄%၊ ကောဇာ ကြာသပတေး၏ အင်အား ၇၄% တို.ကို တစ်ပြိုင်နက် ရထားသဖြင့် မတော်တစ်ဆ အန္တရာယ် ကျရောက် နိုင်ခြင်း ကို ဆိုလိုနေခြင်း မဟုတ်သည်ကို သတိပြုရန် လိုပါသည်။
(၂) အရေးကြီး ဆုံး အချက် တစ်ခုမှာ- ထီပေါက် သော နေရက် ပိုင်းတွင် ကံကောင်း ခြင်း ကို ဖြစ်စေသည့်၊ ထီပေါက်ခြင်း ကို ဖြစ်စေသည့် ၉-တန်. ဘာဝ သခင် ဖြစ်သူ မူလ ကြာသပတေးအား လဂ်သခင် စစ်စစ် ဖြစ်သည့် ကောဇာ အင်္ဂါမှ သမသတ် အမြင် ၉၁% အင်အားဖြင့် နီးစပ် စွာ မြင်ထားခြင်း၊ ၉-တန်. ဘာဝ၏ အလယ် ဗဟို ချက်မှတ်အား လောင်းကစား နှင့် ထီ တို.ကို အကျိုးပေးစေသည့် ၅-တန်.ဘာဝ တွင် ရပ်တည် သော ဂြိုဟ် လည်းဖြစ်၊ လာဘ် လာဘကို ဖေါ်ဆောင်သည့် ၁၁-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် လည်း ဖြစ်သော ကောဇာ စနေမှ ၁၀-တန်.အမြင့် ၉၉% ဖြင့် အတိအကျ လွှမ်းမိုး သက်ရောက် လိုက်ခြင်း သည် ဇာတာရှင်အား ရုတ်တစ်ရက် ချမ်းသာ ခြင်းကို ဖြစ်စေပါတော့သည်။
ကောဇာဂြိုဟ်များမှ မူလဘာဝ များသို. လွှမ်းမိုးမှု။
(၃) ထိုမျှ မက- အလွယ်တကူ ရသော ငွေကြေး နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ၈-တန်.ဘာဝ၏ အလယ်ဗဟိုချက် ကိုလည်း လဂ်၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်သော အင်္ဂါ (၄င်း၏ အကြောင်းကို အထက်တွင် သုံးသပ် ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။) မှ ၄-တန်.အမြင် ၉၇% ဖြင့် အင်အား သက်ရောက်လိုက်ခြင်း ဖြင့် ဇာတာရှင်သည် အလွယ်တကူ ရရှိသော ငွေကြေးဖြင့် ကောင်းစား သွားခြင်း ဖြစ်၏။
(၄) တစ်ချိန်တည်း တွင် ၁-တန်.ဘာဝ၊ ၅-တန်.ဘာဝ၊ ၇-တန်.ဘာဝ၊ ၁၂-တန်.ဘာဝ တို.မှာ ကောင်းသော ဂြိုဟ်များ ၏ အင်အား ထောက်ပံ့ထားခြင်းကို ကောင်းစွာ ရနေခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင် ကိုယ်တိုင်သာ မက- သူ၏ အိမ်ထောင်ဘက်၊ သားသမီး များပါ ဆင်းရဲတွင်းမှ လွတ်မြောက်ပြီး တစ်ချက်တည်း နှင့် ကြီးပွားသွားရခြင်း လည်း ဖြစ်နေပါသည်။
(၃) ထိုမျှမကသေး- ၁၁-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်သော ကောဇာ စနေသည် ၀င်ငွေနှင့် သက်ဆိုင်သော ၂-တန်.ဘာဝ ၏ အလယ် ဗဟိုချက်မှတ် ကို ၃-တန်.အမြင် ဖြင့် လည်းကောင်း၊ မတော်တစ် မှုနှင့် သက်ဆိုင်သော ၆-တန်.ဘာဝ၏ အလယ် ဗဟိုချက်မှတ် ကို ၇-တန်. သမသတ် အမြင် ဖြင့် လည်း ကောင်း၊ အလွယ်တကူ ၀င်ငွေ ရခြင်းနှင့် ဆိုင်သော ၉-တန်.ဘာဝ၏ အလယ်ဗဟိုချက်မှတ်ကို ၁၀-တန်. အမြင်ဖြင့် လည်းကောင်း တစ်ပြိုင်နက် လွှမ်းမိုးထားခြင်းကို တွေ.ရပါသည်။ (အလယ်မှတ် တို.၏ အံသာ နှင့် ကောဇာ စနေ၏ အံသာကို ကြည့်ပါက အလွန် နီးစပ်သည်ကို တွေ.ရပါသည်။)
မူလ ဇာတာမှ ဂြိုဟ်များမှ ကောဇာဂြိုဟ်များသို. လွှမ်းမိုးမှု။
ဤအချက် သည် ရှေးကျမ်းတို.တွင် ဖော်ပြထားမှုကို မတွေ.ရပဲ၊ အိန္ဒိယမှ ဆရာကြီး မစ္စတာ ချောင်ဒရီ၏ နည်း ဖြစ်သော Systems’ Approach နှင့် စာရေးသူ Numan ၏ နည်း ဖြစ်သော MOTAA စနစ် တို.တွင် အသုံးပြုသော နည်း ဖြစ်သည်။
(၁) ကောဇာတနင်္ဂနွေ၊ တနည်းအားဖြင့် လောင်းကစား၊ ထီပေါက်ခြင်း နှင့် ဆိုင်သော ၅-တန်. ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဂြိုဟ်အား မူလ တနင်္ဂနွေ မှ အတိအကျ နီးပါး အမြင်ပြုထားသည်။
(၂) နောက်တစ်ချက်မှာ- မူလ ကြာသပတေး၊ တနည်းအားဖြင့် အလွယ်တကူ ကံကောင်းခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် ၉-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်သူသည် ကောဇာ တနင်္ဂနွေ ကို အတိအကျ အမြင် ပြုနေခြင်း ဖြစ်၏။
(၃) နောက် ဆုံး တစ်ချက် အနေဖြင့် မတော်တစ်ဆမှု ကို ဖြစ်စေတတ်သည့် ၆-တန်. ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဖြစ်သော ကောဇာ ဗုဒ္ဓဟူးအား မူလ တနင်္ဂနွေ (လောင်းကစား၊ ထီပေါက်ခြင်း နှင့် ဆိုင်သော ၅-တန်. ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် ဂြိုဟ်) မှ ၉၅%၊ မူလ ကြာသပတေး ( အလွယ်တကူ ကံကောင်းခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် ၉-တန်.ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင်) တို.မှ စုပေါင်း ထောက်ပံ့နေခြင်း တို.ကို တွေ.ရသည်။
အချုပ် အားဖြင့် ဆိုရသော် ဝေဒပညာ၊ အထူးသဖြင့် နက္ခတ်ပညာ သည် အလွန် နက်နဲ၏၊ ထို.ကြောင့်လည်း ဂမ္ဘီရ၊ နက်နဲသော လျှို.၀ှက်သော ပညာဟု အသိအမှတ် ပြုထားရ၏။ အမှတ်တမဲ့ လေ့လာ သုံးသပ် မိပါက တကယ့် အဖြေမှန် နှင့် ဆန်.ကျင် ဘက် ဖြစ်သွားတတ်၏။
ထို.ကြောင့် ရှေးကျမ်းမြတ် များ၏ မူကို- စုပေါင်း သုံးသပ်၍ ဘက်စုံမှ သုံးသပ်တတ်မှသာ အဖြေမှန်ကို ရမည် ဖြစ်သည်။
ယခု နမူနာ ဇာတာရှင်သည် အလုပ်မျိုးစုံကို လုပ်၍ ဘ၀ကို ရုန်းကန် နေခဲ့ရသော်လည်း- အတိတ်မှ ပြုလုပ်ထားခဲ့သော ကံအားဖြင့် ရုတ်တစ်ရက် ချမ်းသာရန် ကုသိုလ်ကံ ရှိထား၏။ ဒဿာ အားဖြင့် လည်းကောင်း၊ ကောဇာ အားဖြင့် လည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာ ဂြိုဟ်တို.၏ ထူးခြားသော အင်အားကို ရရှိသွားသော အခါ မိသားစု တစ်ခုလုံး ဆင်းရဲ တွင်းမှ လွတ်မြောက်သွားရသည် ကို ထင်ရှားစွာ ပြဆိုနေခြင်း ပင် ဖြစ်တော့ သည်။
English Version of this article can be found at:
အခြားသော ထီပေါက်သူများ၏ ဇာတာ။
အမေရိကန် ဒေါ်လာ တစ်သန်း ဆု ထီပေါက်သူ ရောဘတ် အက်ဘ်နေ၊ နှင့် မိသားစု တို.၏ ဇာတာ
မင်္ဂလာ မဆောင်ခင် တစ်ပါတ်အလိုတွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ တစ်သန်း ဆုထီပေါက်သူ လင်ဒါ ဘော်လ်ဒွင် ၏ ဇာတာ
အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၃-သန်း ထီပေါက်ခဲ့သူ ရို.စ်မာရီ ဘော်ဆာ ၏ ဇာတာ၊
အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၉-သန်း ခွဲ တန် ထီပေါက်ခဲ့သူ အမွှာ ညီအကိုမှ အကြီးဖြစ်သူ ဘရူနို ကယ်လူးန် နှင့် ဇနီး တို. ၏ ဇာတာ၊
အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂-သန်း၊ ၇-သိန်းတန် ထီပေါက်သူ ထရပ်ကား မောင်း သမား ရပ်ဆဲလ် ကလာ့ခ် ၏ ဇာတာ၊
အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃-သောင်း တန် ထီပေါက်သူ အမေရိကန် ဗေဒင်ဆရာမ နန်စီ ဒီယွန်နီ ၏ ဇာတာ၊
အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၅-သန်း၊ ၆-သိန်း၊ ၄-သောင်း၊ ၂-ထောင့် တစ်ရာ ဘိုး ထီဆုကြီးပေါက်ခဲ့သူ အမွှာ ညီအကို နှစ်ယောက် ၏ ဇာတာ၊
အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂-သောင်း၊ ၈-ထောင် တန်ထီပေါက်သူ ဘာဘရာ ဂလေဗိုင်း၏ ဇာတာ၊
အမေရိကန် ဒေါ်လာ တစ်သန်း ဆုထီပေါက်သူ ရဲအရာရှိ ရစ်ချတ် ဂရိတ်ဒါ ၏ ဇာတာ၊
ဆုကြေးနည်းသော ထီကို ၀ယ်သော်လည်း ထီဆိုင်မှ ဆုကြေးများသော ထီလက်မှတ်နှင့် မှားယွင်း ရောင်း မိသဖြင့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၃-သန်းတန် ဆုထီပေါက်သွား သူ အလုပ်လက်မဲ့ ဒုက္ခိတ ဖြစ်သူ ကက်နက် ဂရင်းန် ၏ ဇာတာ၊
ဗေဒင်ပညာကို လက်တွေ. အသုံးချပြီး ဒေါ်လာ တစ်သောင်း တန် ထီကို ရယူခဲ့ သူ ပေါလ် အာရ် ဂရဲလ် နှင့် ဇနီး တို.၏ ဇာတာ။
ဇနီးဖြစ်သူ တွင် ကုသရန် ဆေးမရှိသော ရောဂါကို ခံစားနေသော်လည်း ဒေါ်လာ ၄-သန်း တန် ထီဆု ပေါက်သွားသော ဟာရီတန် ဇနီးမောင်နှံ တို.၏ ဇာတာ၊
ရေပိုက်ပြင် အလုပ်သမား ဖြစ်သော်လည်း အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေရာမှ ဒေါ်လာ ၂၆-သန်း၊ ၇-သိန်းတန် ထီ (ထိုစဉ်က အမေရိကန် ထီသမိုင်းတွင် တတိယ အများဆုံး) ဆုပေါက်ခဲ့သူ ဘရုစ်ဂျွန် ဟဲဂါတီ ၏ ဇာတာ။
မီးဖွားနေသော ဇနီးသည် ကို ကြည့်ရန် ဆေးရုံအသွား လမ်းတွင် ထိုးသွားမိသော ထီမှ ဒေါ်လာ ၅-သောင်း တန် ထီပေါက်ခဲ့သူ ရစ်ချတ် ဟော်ဂန်၏ ဇာတာ။
ဒေါ်လာ တစ်သောင်း ၄-သောင်းတန် ဆုပစ္စည်းများ နှင့် ခရီးသွား ဆုကြေး ပေါက်ခဲ့သူ ဂျူယန်ဒါ ဟောလ်ဘတ် ၏ ဇာတာ၊
ကမ္ဘာကျော် မက်ဆာချူဆက် ထီကြီးတွင် ဒေါ်လာ သန်း (၈၀) ကို ပေါက်ခဲ့သူ ၃-ဦး အနက်မှ တစ်ဦး ဖြစ်သူ ဒပ်ဗ်ရာ ဟိုလ်း ၏ ဇာတာ၊
Slot Machine တွင် ၃-ကျပ်တန် လောင်းခဲ့ရာမှ ဒေါ်လာ တစ်သန်း၊ ၇-သိန်းကျော် အနိုင်ရခဲ့သော အစ်ပိုလီတို မိသားစု တို.၏ ဇာတာ၊
ဒေါ်လာ တစ်သောင်း ထီ ပေါက်ခဲ့သူ ဗေဒင်ပညာရှင် ဟူးအီး ဂျက်ဖ်ကုတ် ၏ ဇာတာ၊
ဒေါ်လာ ၂၁-သန်း တန် ထီကို ပေါက်သော်လည်း ထီဆိုင်နှင့် အမှု ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသော ထီကြွေးများ နှင့် ပါတ်လည် ၀ိုင်းနေခဲ့သူ ပါရာကိဗ် ကန်.ဂျက်စ် ၏ ဇာတာ၊
Slot Machine များတွင် မကြာခဏ အနိုင်ရခဲ့သူ ရှာလီ ကယ်လ်နာ ၏ ဇာတာ၊
ဒေါ်လာ ၁-သန်း တန် ထီပေါက်ခဲ့သော စကိတ်စီး ချန်ပီယန် နန်စီ ကာရီဂန်၏ မိခင်၏ ဇာတာ၊
မက်ဆာချူဆက် ထီမှ ဒေါ်လာ ၄-သန်းတန် ထီကို ဆွတ်ခူး ရခဲ့သူ အလုပ်ကြမ်းသမား ရောဘတ် မာန်. ၏ ဇာတာ၊
ထိုဇာတာများအား လွန်စွာ တိကျမှန်ကန် သော MOTAA ဖြင့် သုံးသပ်ထားချက်များကို လေ့လာလိုပါက မူရင်း စာအုပ်တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
နျူမာန် (မိုးတား) Numan (MOTAA)
ဂြိုလ်စပ်ဆက်မှု အင်အား အသေးစိတ်တွက်ချက်မှုကို သိလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒီအတိုင်းဖတ်ကြည့်တော့ ဒီအားရှိလို့ ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာထက် ဒီအားကို ဘယ်လို ဖေါ်ထုတ်ထားတယ် ဆိုတဲ့နည်းလေး မစ,ပါခင်ဗျာ။
Please don't neglect to predict for URANUS,PLUTO and NEPTUNE combination with other planets.According to her birth chart, we can see very clearly the combination of URANUS and JUPITER in trine position.